Svetlogorsk सैन्य अस्पताल - आधिकारिक साइट समीक्षा
कलिनिन्ग्राद क्षेत्र, देश अलग - धेरै अनौठो ठाउँ। ठूलो रूसी यो पृथ्वीमा आउँदै वसोवास लागि ambivalent छ: एक हात मा, तपाईं घरमा हुनुहुन्छ, र अन्य मा - विदेश। बाँकी - रूसी संघ को westernmost विषय गर्न यात्राको लागि धेरै कारण, तिनीहरूलाई को एक छन्। सबै पछि, कलिनिन्ग्राद क्षेत्र मा प्रत्यक्ष पहुँच छ बाल्टिक सागर। तथापि, आधुनिक मानिस बस राम्रो हुनेछ पनि उनको स्वास्थ्य सुधार गर्न एक सानो तट मा आराम गर्न। यो सुविधा सैन्य अस्पताल "Svetlogorsk" कलिनिन्ग्राद क्षेत्र प्रदान गर्दछ।
आज अस्पताल "Svetlogorsk" - देश को सबै भन्दा प्रसिद्ध रिसोर्ट्स को छ। यो सालाना हजारौं आकर्षित मात्र होइन उनको स्वास्थ्य सुधार, तर पनि प्राकृतिक वातावरण मा आराम गर्न। को कलिनिन्ग्राद क्षेत्र यसको परिदृश्य, वनस्पति र जीव लागि प्रसिद्ध छ। Svetlogorsk सैन्य अस्पताल फरक आय को मान्छे आराम गर्न सक्छन्। स्वास्थ्य रिसोर्ट एकदम जोडे बीच लोकप्रिय छ। आफ्नो प्रसिद्धि यसलाई प्रदान सेवाहरूको गुणस्तर धन्यवाद प्राप्त। संस्थाले माटोको उपचार, शारीरिक उपचार, विभिन्न प्रकारका मालिश सहित चिकित्सा प्रक्रियाहरु, को एक धेरै प्रभावशाली सूची प्रदान गर्दछ। राम्रो विकास र मनोरञ्जन क्षेत्र - प्रत्येक अतिथि सबैलाई यहाँ को लागि केहि पाउनुहुनेछ। लेख मा जान्छ र त्यहाँ प्रदान गरिएको सेवाहरू बारेमा संस्थाले को इतिहास बारेमा थप, साथै सिक्न पत्ता लगाउन।
गार्ड स्वास्थ्य मा दुई शताब्दीअघि
सैन्य स्वास्थ्य "Svetlogorsk" इतिहास दुई बारेमा शताब्दीयौंदेखि छ। चुनिएको घरबार स्थान जब घनिष्ठ शहर अझै पनि Raushen र रूस मा भनिएको छ समावेश गरिएको थिएन, प्रारम्भिक 19 औं सताब्दी मा अझै पनि छ।, यो जर्मनी थियो। आधिकारिक, पहिलो पर्यटकहरूले बाल्टिक सागर जुन 20, 1820 को तट मा आइपुगेको, यो होटल यहाँ स्थित हो त आफ्नो पहिलो सिजन खोलिएको थियो। तुरुन्तै राज्यभिषेक पछि - - (यो 20 वर्ष भयो) भ्रमण फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ तथापि, Rauschen जब वास्तविक कथा क्षण देखि रिसोर्टमा गणना लायक छ। देखेको पहनाया व्यक्ति यो एक लोकप्रिय स्थान बनाएको छ, र उहाँले सक्रिय बढ्न थाले। यसरी बोर्डिङ घर "Svetlogorsk" को इतिहास सुरु भयो। केन्द्रीय सैन्य अस्पताल अब रूस मा सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक मानिन्छ।
युद्ध पछि जीवन
Svetlogorsk सैन्य अस्पताल साइट संस्थाले बारेमा थप जानकारी छ। यस लेखमा छोटकरीमा यसलाई केन्द्रित हुनेछ। अस्पताल - लाल सेना को मुख्य चिकित्सा विभाग बस एक छुट्टी घर, एक अस्पताल सिर्जना गर्न आधार Resort निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सामान्य कर्मचारी र सोभियत संघ को सरकार द्वारा समर्थित थियो। नोभेम्बर 10 मा, संस्था जिल्ला सैन्य अस्पताल को नाम "Rauschen" अन्तर्गत सञ्चालन गर्न थाले। पछि वर्ष मा, एक स्वास्थ्य रिसोर्ट छैन एक पटक, छैन पनि दुई यसको आधिकारिक नाम परिवर्तन गरियो। Vacationers पनि यस पुनर्निर्माण र रिसोर्ट को नयाँ भवन निर्माण गर्न योगदान, अस्पताल भनिन्छ "उत्तरी सोची"। नाम संग भ्रम देर सोभियत संघ मा समाप्त भयो। 1987 मा, स्वास्थ्य रिसोर्ट केन्द्रीय Svetlogorsk सैन्य अस्पताल पुन: नामाकरण गरिएको थियो। यो शीर्षक अन्तर्गत आज पेन्सन अवस्थित छ।
अद्वितीय जलवायु, स्वस्थ समुद्र हावा, खनिज पानी, पीट माटोको - जस्तै बाल्टिक र अन्य समुद्र धेरै रिसोर्ट्स प्रस्ताव गर्न सक्ने कुरा हो। Svetlogorsk सैन्य अस्पताल (स्वास्थ्य रिसोर्ट मा समीक्षा यस वाउचर खरीदारों पुष्टि) छ जो मुख्य सुविधा, - कर्मियों को योग्यता को एक उच्च स्तर छ। स्वास्थ्य रिसोर्ट को राज्य पहिलो श्रेणी चिकित्सा विज्ञान पाँच उम्मेदवार, उच्चतम श्रेणी को 11 डाक्टर र आफ्नो 12 सहयोगिहरु रोजगार मा, कर्मचारी नर्स 66 मान्छे हुन्छन्।
उपचार उचित पोषण बिना - एक मिथक
स्वास्थ्य समायोजन, हलिडे राम्रो हुन र सही खान गर्नुपर्छ। Svetlogorsk यो साथ केन्द्रीय सैन्य अस्पताल ठीक। मिति, स्थानीय भोजन को फाइलहरु परम्परागत व्यञ्जनहरु र आहार अनुसार, चिकित्सा सिफारिसहरू अनुसार डिजाइन 820 व्यञ्जन छ। यसबाहेक, मेनु निरन्तर बढ्दै छ। हरेक वर्ष, यो कर्मचारीहरु STSVS विकास बारे 12 व्यञ्जन थपियो।
"Svetlogorsk" सैन्य अस्पताल। सांस्कृतिक कार्यक्रम बारे अतिथि समीक्षा
1985 मा, अस्पताल को क्षेत्र मा क्लब खुलेको छ। सांस्कृतिक संस्थाले तुरुन्तै काम गर्न थाले, र STSVS लागि, तर पनि सम्पूर्ण शहर मात्र होइन। यसको गतिविधिहरु एक मनोरञ्जन क्षेत्र रूपमा छ - आयोजित सांगीतिक साँझमा, स्थानीय तारा र सबै-संघ र बौद्धिक को संगीत - रोचक मान्छे संग सभाहरूमा संगठित गर्न, श्रृंखला मा खेल "के कहाँ जब ???", को, राजनीतिक चिकित्सा र ऐतिहासिक विषयहरू एउटा व्याख्यान। पनि एक जो एक फिलिम तिहार "बाल्टिक Debuts" छ अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरु, पकड। आज, क्लब हलिडे र स्थानीय को आनन्द गर्न सञ्चालन गर्न जारी छ। धेरै पाहुनाहरूलाई enthusiastically यो बिताएको को घन्टा सम्झन। खैर, त्यहाँ Svetlogorsk र यसको आकर्षण छ। एक अस्पताल आगंतुकों आफ्नो रहन समयमा रोचक ठाउँमा यात्राहरु बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
सबै इतिहास प्रेमीहरूको को पहिलो वर्ण STSVS ध्यान गर्नुपर्छ - पानी टावर। प्रारम्भिक 20 औं शताब्दीमा यो निर्माण, यसको उचाइ 25 मिटर छ यो हेर्न सजिलो हुन सक्छ, तर तपाईं पनि स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्छन् - यो माटोको स्नान हुन्छ। चासो पनि स्थानीय मिल छ। यो oddly पर्याप्त, उनको थियो, र सैन्य अस्पताल "Svetlogorsk" थाले। मूल बाल्टिक सागर होटल नजिकै एक स्थानीय ताल को किनारमा स्थित एक छुट्टी गन्तव्य किनभने स्यान्डड्युन, hinders उत्पादनहरु को आपूर्ति र पर्यटक आगमन जो निर्माण छैन। तर चाँडै व्यवसायियों मिल गर्न सडक ध्यान। लामो समय छ, र उनको सुन्दर सार्ने घोडा Carts। एक समय नजिक दोस्रो, र गठन रिसोर्टमा वृद्धि पछि, पहिलो होटल निर्माण गरे। पर्यटक संख्या यो निर्माण गर्न र आफ्नै driveway सम्भव थियो कि यस्तो थियो रूपमा मिल गर्न सडक चाँडै यसको महत्व गुमाए। को मिल बाट टाढा समुद्र तट छ। साथै, रिसोर्ट्स र Svetlogorsk त्यहाँ अझै पनि "चुडैल टावर", एक Sundial, र जो ऐतिहासिक महत्व छन् मूर्तिहरु, एक नम्बर हो।
आज सैन्य अस्पताल "Svetlogorsk" - आधुनिक उच्च प्रविधी स्वास्थ्य केन्द्र हो। खैर, STSVS केटाकेटीलाई लागि यसको आफ्नै सांस्कृतिक र चिकित्सा कार्यक्रम तयार पारे। Svetlogorsk सैन्य अस्पताल मा मूल्यहरु एकदम सानो छ। यस मामला मा, मूल्य मा भोजन, आवास, साथै चिकित्सा सेवा को एक व्यापक सूची समावेश।
मोनाको को Oceanographic संग्रहालय: विवरण, ठेगाना, शीर्षकमाथिको घण्टा
घण्टा कुटिया: भ्रमण कहिले र के हेर्न
Anapa, पेन्सन "Odyssey": फोटो र पर्यटकहरु को समीक्षा
एलिया अगमवक्ता को Yaroslavl चर्च: विवरण, इतिहास
Sayano-Shushenskaya बाँध: वर्णन, मनोरञ्जन, माछा मार्ने
कजान आकर्षण। जहाँ कजान मा हिउँदमा जाने
पाठ अर्थशास्त्र: के कपडे गर्न कपडे गोंद
गर्भावस्था मा फोलिक एसिड - जो उत्पादनहरु आफैलाई ज्यादै पुलपुल्याउने गर्न
कैन्यन - जसको राष्ट्रिय पकवान र तिनीहरूलाई कसरी तयार गर्ने?
वेबसाइट कसरी ब्लक गर्न
ग्रीस: कोर्फू र ऐतिहासिक सम्पदा
दीपक लागि वतीको ढक्कन - सजाउनु एक सुरुचिपूर्ण तरिका
मास्को मा बेबी पसलहरूमा: नाम को एक सूची। मास्को मा अनलाइन स्टोर छोराछोरीको सामान सूची
गोडा प्रतिस्थापन - हाडजोर्नी सेवा इजरायल
शैलीहरू को एक किसिम मा कुरा - लामो cardigan
नाक बच्चाहरु को लागि खस्छ
एक्रिलिक नङ कला काम गर्दछ। विवरण, मूल्य